माधवलाई अालेले पछारे, देउवालाई प्रचन्नले लतारे! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतवार, जेष्ठ २९, २०७९ मा प्रकाशित
यसपालि बजारमा हाम्रो मन्त्री प्रेम अालेकै चर्चा छ । जेसुकै भने पनि प्रधानमन्त्री देउवा, माधव नेपाल र हाम्रो प्रचन्नलाई अालेले थर्काएर छाडे । माधव काम्रेसको निर्नय त अालेले लतार्दिए । खाइपाई अाएको मौजामाथि `एट्याक´ गरेपछि कल्ले सहन्छ ! जे गरे अालेले ठिक गरे । अब नेकपा समाजवादी पार्टीको निर्णायक व्यक्ति पनि देउवा नै बने जस्तो देखियो भनेर हल्ला गर्नेलाई चाहिँ दह्रो जवाफ दिने काम झलनाथ काम्रेसकै हो । झलनाथजीले `मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने निर्नय धर्तीको कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने´ भनेर बजारमा व्यापक प्रचार गरेका छन् । झलनाथजी पनि गफ चाहिँ दोचार्न जान्ने रान । देउवा र प्रचन्न नभए अाफ्नो पार्टीको अवस्था धोती न टोपी हुने भएसी उनार्कै अादेश लिएर काम गर्न कस्तो विर्सेको ! अब नेकपा समाजवादीको हर्ताकर्ता देउवा, प्रचन्न र हाम्रो प्रेम अाले नै हुन । उनार्लाई नसोधी कौनै काम गरेमा त्यो सफल हुने छैन ।
मेटमणिको दौरा र जीवनरामको सुरुवाल पनि काम लाग्ला जस्तो छैन । अलि हतार गरेर सिलाएछन् । हुनत माधव काम्रेसले `हाम्रा मन्त्रीहरू सारै अनुशासित छन्, पार्टीको निर्णय प्रति उनीहरू सन्तुष्ट छन्, छ महिनाको लागि मन्त्री बनेको भन्ने कुरामा उनीहरू प्रष्ट छन् । हाम्रो बारेमा मिडियाले भ्रम फैलाउने काम गरेको छ´भनेर भासन ठोके तर, उनको भनाइ पत्याउने ठाम छैन । नेकपा समाजवादीले मन्त्री फेरबदलको निर्नय गर्नासाथ निस्कासनमा पर्न लागेका अाले झाँक्री लगायतका अाफ्ना मन्त्री देउवा र प्रचन्नकोमा पुगेर नेकपा एस नै ध्वस्त बनाम्ने साथै गठबन्धन ढाली दिने धम्की दिए । अध्यक्ष माधवसँग यसको जवाफ छैन् । अाफ्ना मन्त्री फेर्ने निर्नय पार्टीले गरेकै हो । प्रधानमन्त्री र हाम्रो प्रचन्न काम्रेसले `अहिलेलाई तिमारूनै मन्त्री रहन्छौ, `तथास्तु´ भन्दै चुनाउ नभएसम्मलाई स्थायी रहने वर्दान दिएर पठाएको चुरो कुरो पनि सही सत्य हो ।
पार्टीबाट चोइटिने बेलामा `तिमारू सप्पैको मन्त्री बन्ने रहर पुरा गरिदिने छु´भनिकन माधव काम्रेसले सहीछाप धस्काएका छन् । बचन पुरा गर्न नसक्दा उनीकन अहिले अप्ठ्यारो स्थिति भोग्दैछन् । यता अहिले कुर्सीको भरपुर उपयोग नगरे भविष्यको अाश छैन । अहिले नै छोप्नुपर्छ विसेडी अाको बेला माछा । पद र पैसो जम्मा गर्ने सुनौलो अवसर उम्काउनु मनासिब छैन । अबको चुनाउमा जित्न गाह्रो छ । एकातिर देउवाले अर्कातिर प्रचन्न काम्रेसले पाखुरा समार नताने पार्टी नै ह्वार्लाङपाटे हुन्छ । त्यही बुझेर त माधव काम्रेस बेलाबेला `यो गठबन्धन अनन्त कालसम्म रहन्छ´भनिकन भासन गर्छन् ।
नमस्कार है विध्वंसे काका ! हामी त झुम्री काकीले बनाको चिया खाँउ भनेर यता अाको । काकी खै त ! कि माइत गइन !
घरमै छ । अँ भिरघरे ! बरु भन काठमाडौंतिर माधव नेपालहर्ले मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने निर्नय गरेका थिए के भयो ? अनि कोको नयाँ मन्त्री भए ? कि माधवको निर्नय देउवा र प्रचन्नले खाई दिए !
हौ काका ! `कल्लाई केको धन्दा कल्लाई केको धन्दा, घरज्वाइँलाई खानको धन्दा´ भने जस्तो माधवलाई चाहिँ अहिले नै मन्त्री `चेनफेन´ किन गर्नु पर्यो ?
लु चिया खाँदै अर्काको कुरा काटेर बस् । माधव बिचरा अहिले बिलखबन्दमा छन् । अाफूले निर्नय गरेपछि प्रेम अाले, झाँक्रीहर्ले मानिहाल्छन् भन्ने भ्रममा थिए । अाले र झाँक्रीले माधव काम्रेसलाई भ्रमबाट मुक्त बनाइ दिए । देउवा र प्रचन्न सरकारको जग नै हल्लाइ दिएपछि माधव नेपाल चिल्लाको चिल्लै ।
झुम्री काकीको कुरो ठिकै हो । अब अाम्ने चुनापमा पनि देउवा र प्रचन्नले माधवलाई एकल्याउने छाँट देखिदै छ । त्यस बखत अाले, झाँक्री, किसानहरू कांम्रेस वा माउवादी बनी सकेका हुने छन् । उनारू अब `उठ जोगी फड्कार छाला, जहाँ जाला उहीँ खाला´ भन्ने अवस्थामा पुगीसकेका छन् । पानदले गठबन्धन टुटेर दुईदले बन्ने देखिदै छ । यदि गठबन्धन टुट्यो भने माधव, उपेन्द्र र मोहन विक्रमको पार्टी धुलिसात हुन्छ ।
सण्डे भाइको कुरो ठिकै हो । तर, हाम्रो कांम्रेस पार्टी अब एक्लै चुनाप लढ्छ । प्रचन्नलाई पनि मिल्काउनु पर्छ । यो स्थानीय चुनाउमा पनि प्रचन्न र माधवलाई मात्र फाइदा भयो । हाम्रो काम्रेसलाई केही न केही । कति बोकेर हिड्नु कम्युनिष्टेका छाउरा ! कि कसो झुम्री काकी !
बेठिक हुदैहोइन । कित चार तारे झण्डाको अोत लाग्नु कित एक्लै चुनाव लड्नु । जहिल्यै अर्काको बुइ चढेर पार तर्न लाज पनि लाग्नु पर्ने हो । अनि हामीलाई `प्रधानमन्त्रीको अफर अाको छ´ भनेर देउवासँग `वार्गेनिङ´गर्न थाल्छन् । लाज घिन त्यागेपछि कसैको केही लाग्दैन भनेको यही हो । अझ पनि यिनार्लाई अोलीले बोलाउछन् भन्ने लाग्दो रछ । अोलीले बोलाउदैनन् । बरु कांग्रेसमा विलय भए हुन्छ ।
यो झुम्री पनि बढी नै जान्ने हुन्छे । अब हाम्रो प्रचन्न काम्रेस नभए यहाँको राजनीति नै समाप्त हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दैन । यस्ता अोली देउवा हर्लाई थाङ्गनामा सुताउदै भए पनि शासन सत्ताको बागडोर हाम्रो काम्रेस प्रचन्नकै हातमा हुन्छ । खै अाजसम्म घुमाएर ढडियामा हालेकै छन् ।
हौ काका ! यसरी अर्काको भान्सामा छिरेर कति दिन टपरी थापेर निर्वाह होला ! कुनै दिन भान्सेले डाम बस्ने गरी पन्युले हान्यो भने के गर्ने ? अहिले नै मागिमागी घ्युउ खाते भन्न थालीसके । अब अोलीले ज्यान गए लिदैनन् । अन्तका मान्छेले पनि यिनलाई चिनीसके । माधव र प्रचन्नलाई अब बोक्नु हुदैन भनेर हाम्रो कांम्रेस भित्रै अावाज उठ्न थालेको छ ।
यदि प्रचन्नलाई कांम्रेसले हेपो भने कांग्रेस पनि समाप्त हुन्छ । कांग्रेसले एक्ला एक्लै उठ्ने कुरा गर्यो भने पनि मुलुकमा अनर्थ भयो भनेर सोचे हुन्छ । त्यसबेला अोलीको पार्टीले एकलौटी जित्छ ।
अोलीको पार्टीले जित्ता केभो त ! राम्रै हुन्छ । तिमारू भन्दा लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी पार्टी एमाले नै हो । अहिलेसम्म नेपाली जनताले यही बुझेका छन् ।
मेरो कन्सिरी तात्ने कुरो नगर भिरघरे ! एमसिसी पास गरेर देउवालाई लगाएको गुन तिर्नु पर्दैन । वाइयात कुरा गर्दो रछ । प्रचन्न जस्तो चतुरे नेता संसारमै छैन् ।
लौ जाउ सण्डे उभिण्डेतिर । यस्तासँग कुरा गरेर कुनै फाइदा छैन ।
अाजलाई जै नेपाल !
एक बलात्कृत बारे आमा याङ्ग्रीको बकपत्र